Dowlad Islaam ah waqtigaan ma laga hirgalin karaa Soomaaliya?, Yaase u xilsaaran inuu ka hirgaliyo Soomaaliya nidaamkaas ?
Qore: Yusuf MAY
Somali Political Columnist
Dalka Soomaaliya waxaa ku nool dad Muslim ah 100%, balse Soomaali ah dhaqankooduna yahay reer guuraa xoolo dhaqato iyo beeralay isugu jira, diinta Islaamkana xoog iyo seef laguma soo gaarsiinin ama aan iraahdo qasab, kadib markii asxaabta ay soo gaareen dhulka Soomaaliya biloowgii faafida Diinta Islaamka sida taariikhdu qortey ayay dadka Soomaaliyeed Islaanimada qaateen.
Soomaaliya waxay ku taal meel aad muhiim uga ah dunida, waxayna dhacdaa Badwaynta Hindiya iyo Badda cas ama dhulka loo yaqaan Horn of Africa, sidaa daraadeed ayay dunida dhan isha ugu haysaa waxyaabaha ka dhacaya Soomaaliya, saamayn buuxdana ugu leeyihiin arimaha Soomaaliya.
Wadamada dariska la ah Soomaaliyana dhamaantood waxaa kala dhaxeeya qadiyado badan sida Ethopia, Kenya iyo Yemen, madaama ay dhul, dad iyo duunyaba ay naga haystaan, waxayna dhulkeena iyo dadkeena ku hayaan faragalin joogta ah, mana doonayaan inay Soomaaliya ka dhalato dowlad la awood ah islamarkaana la xisaabtami karta mar kale.
Wadamada Galbeedka Soomaaliya waxay u arkaan wadan leh xeeb istaraajidyad u leh danahooda iskuna xirta Bariga dhaxe iyo Afrika ama Dunida inteeda kale, waxaana taas u sii dheer in dhulka Soomaaliweyn uu Allah ku manaystey khayraad aad u badan oo noocyo kala duwan ah, marka reer Galbeedka ma doonayaan in danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya in cid kale gacanta u gasho oo ka soo horjeeda danahooda,taasna waxaa sabab u ah sidii ay u burburiyeen dowladii hore ee Soomaaliya ee wadanka ka talinaysay 21 sano iyo iftiinkii ka soo baxay magaalada Muqdisho mudadii yareyd.
RAJADA SHACABKA SOOMAALIYEED
18 sanadood oo dagaalo sokeeye qaxootinimo, qax, barakac, dhimasho, dhaawac iyo saboolnimo yaa hadana waxaa wali muuqda in dhibaatada Soomaaliya aysan dhamaanaynin mar dhaw, taas oo ay ugu wacan tahay dadka Soomaaliyeed oo aad u kala qaybsan iyo faragalin baaxad weyn oo lagu hayo.
DIINTA IN LA ISKU XUKUMO
Dalka Soomaaliya in diinta Islaamka lagu xukumo waa arin muhiim iyo waajib ah, madaama aanu Muslin nahay dhamaanteen, sidaa daraadeedna noqon karta tan kaliya ee dadka Soomaaliyeed ku heli karaan cadaalad, sinaan iyo horumar iskuna aamini karaan 18 sano oo dhibaato ah kadib, hasayeeshee waxaa jira in hadana aysan sahlanayn in dalka Soomaaliya waqtigaan lagu xukumo shareecada Islaamka.
Arinkaasna waxaa sababo u ah aragtida aan ka qabo oo ku salaysan xaqiiqda ka jirta dalka Soomaaliya iyo afkaaraha kala duwan ay kala qabaan dadka Soomaaliyeed iyo faragalinta awoodaha shisheeyaha ee siyaasada Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed oo idil way isku raacsan yihiin inay Islaam wada yihiin laakinse iskuma wada raacsana cida xaqa u leh inay ku hogaamiso dowlad Islaam ah sababtoo ah hadaa eegto ururada ka jira Soomaaliya, markaan ka soo tago kuwa siyaasada ee ku dhisan qaabka qabaa’ilka iska soo horjeeda ee is fiirsanaya, hadana waxaa jira ururo diimeedyo iska soo horjeeda sida Alitixaad, Alislaax, Alla Suna wal jameeca, Tabliiq, Baaba Suufi, Alshabaab iwm ah.
Culimada Soomaaliyeed waxay ku fashilmeen sidaan qabo inay wax ka qabtaan dhibaatada ku habsatey ummadooda, waxayna la wada safteen qabaa’iladooda, iyagoo iska iloobay masuuliyada ka saarnayd dadkooda, dalkooda, diintooda iyo waajibaadka ka sarnaa, waxayna noqdeen kuwa fashilmay kuna fashilmay inay joojiyaan ama kala dhaxgalaan Qabaa’ilada dirirta ka dhaxayso.
Alitixaad, Alislaax, Alla Sunna wal jameeca, Tabliiq, Alshabaab iwm ah oo isku aragti ahayn,taasna ay u sii dheer tahay is nacayb dhaxdooda ah dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatada ma ka saari karaan?.
Jawaabtu waa maya, owal hadaan dalkeenii ku soo halaagnay qabiil iyo xukun jacayl hadana ummada Soomaaliyeed ma gali karaan dagaal diin iyo aragti ku dhisan danaysi, is kooxaysi lagu doonaayo in mansab siyaasadeed lagu gaaro.
Aniga waxaan qabaa in waqtigan xaadirka ah Soomaaliya oo laga dhisin xaga aqoonta iyo edaabta lana soo celin is aamidii shacabka
islamarkaana la heshiisinin dadka Soomaaliyeed inay adag tahay in dadka lagu qaldo arimo dad dano shaqsiyadeed ka leeyihiin.
Tusaale lix bilood ee nabada ka jirtey magaalada Muqdisho aniga waxaan qabaa inay keeneen shacabka Soomaaliyeed ayna magaalada ka xoreeyeen qabqablayaashii xaraanta ku haysan jirey balse ragii maxkamadaha ahaa, markii shacabkii aaminay gacana siiyeen inay la soo baxeen ajandayaal siyaasadeed aysan waligood ku riyoon jirin, ayna u arkeen fursadaas in caburiyaan shacabka ugu dambayntiina waxay afka u galeen cadawgii Soomaaliya, iyagoo dagaal la galay kadib markii lagu qalqaaliyey inay dalka qabsan karaan si fudud ayna is biideen awood aysan ka fiirsan waxa ka imaan kara.
Waxayna si cad u diideen taladii ay umadda Soomaaliyeed kula taliyeen, dagaalkii kadib waxaa soo baxday in maxkamadaha kala qaybsanaantooda baaxada weyn iyo fikirka ay kala qabaan.
Marka aniga waxaan oran lahaa waxaan jirin oo aan dhalan yaan waqtiga la iskaga qaadin waayo raga hada ideecadaha ka hadlaya intee bay jireen markii shacabka masaakiinta ah dhimanayeen, maxay uga hadli waayeen dhibatadaas marka hada ay Fatwo aan jirin oo dana laga leeyahay la soo saaraayo maalin kasto.
Soomaaliya waxay khatar ugu jirtaa inay noqoto Afghanistaan oo kale sababtoo ah ALqaacida ayaaba noo yeerinayso waxay rabto oo oranaysa dirara jihaada iyo waxaan jirin ayaa loogu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan, ujeedada laga leeyahayna waxay tahay in gumaystaha dalkeena haysta lagu sii hayo si shacabka dhibaatada lagu hayo lagu sii hayo.
Waxaan ummadda Soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah ugu baaqayaa inay gacmaha is qabsadaan iskana hilmaamaan dhibaatada damiirlawayaasha uu dhax dhigay ayna u soo jeestaan inay dalkooda ka xoreeyaan kuwa Ethopia ku adeegato iyo kuwa iska dhiigaayo ama isku ekaysiinaayo Alqaacida.
Yaa og inay u shaqeeyaan Tigreega iyo Mareykankaba wadaad baa lagu leeyahay aqoon fiicana looma laha qofka ideecadaha ka aqrinaya wararka lagu dilaayo shacabka aan waxba galabsan.
Calaakuli xaal waxay ila tahay inaan la gaarin waqtigii Soomaaliya lagu xukumi lahaa diinta Islaamka, sababta aan saas u leeyahay waxay tahay ma ka horeysoo waxaas dhan in dadka la baro diinta, dadkii ku xukumi lahaana inay iyaga doortaan soo ma ahan.
Waxaan filayaa inaysan jirin waqtiga hada la joogo cid loogu soo wax yooday inay Soomaaliya iyada ku xukunto diinta Islaamka hadii kalane dagaalada iska sii socon doonaan, waxaan kale oo aad muhiim ah in qofkii rabo inuu dalka Soomaaliya xukumo inuu xisbi siyaasi ah furto , xisbigaasna uusan wax shaqo ah ku yeelan qabiil iyo khaa’inimo ama cadaalad daro, uunu ku dadaalo in dadka Soomaaliyeed oo idil ay ka koobnaadan ha ahaado ururka mid diin salka ku hayo ama mid kalaba, waayo wax kasta oo aan loo dhamayn raalina laga wada ahayn way fashilmaan.
Waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa in shacabka Soomaaliyeed danahooda gartaan kana hor yimadaan kuwa qabiilka, basaasnimada iyo shaarar kala duwan wax ku raadinaya ama kuwa raba inay dadka ku qaldaan Diin aan daacad laga ahayn, maxay is dhamaan kuwa laga xukumo Addis Abbaba , Casmara, iyo Tora Bora?